Fahasalamana - Mag tsy mampino
Lakilasy 3 hahatongavana ho mpitsabo tsara indrindra
Na efa dokotera nandritra ny fotoana fohy na taona maro ianao, dia maniry ny ho tonga lafatra tsara indrindra. Noho izany eritreritra izany, efa nanao izay rehetra vitanao ve ianao izao hahatonga anao sy ny fanao ho…
Voadona ve ny fahasalamanao?
Amin'ny famerenana izao tontolo izao izao, mihombo ve ny fahasalamanao? Raha eny no navalinao dia inona no azonao atao mba ahodinanao ny raharaha? Ny famelana ny fahasalamanao hijaly mandritra ny fotoana maharitra dia mety hiteraka olana mety ho henjana…
FANAMARIHANA TSY MISAINGA FOTSINY FOTSINY
Na dia tsy nijanona nandritra ny taona maro aza ny tanjon'ny fitsapana ara-pahasalamana, dia niova be ny fomba nanombohana ny fitsapana. Ny fanovana ho avy dia, raha ny marina, amin'ny fifanoratana amin'ny fanatsarana ny fizotran'ny fizotrany amin'ny valiny marina kokoa. Fitsapana amin'ny fikarohana klinika izay natao androany…
Fitsapana amin'ny fikarohana ara-pitsaboana: ny zavatra tokony ho fantatrao
Mety ho liana amin'ny fikarohana ara-pitsaboana na tombontsoa momba ny fizaham-pitsaboana ianao, fa inona avy ireo tombony azo, risika na fanamby amin'ny karazana fitsapana ho fantatra fa sarotra ho fantatra. Ny fitsapana klinika tsirairay dia samy manana ny lanjany sy ny loza mety hitranga,…
Hevitra 3 hitazona ao an-tsainao momba ny naturotherapy
Efa nandre momba ny fomba fitsaboana izay manasitrana sy mitsabo ny vatana amin'ny fomba fitsaboana voajanahary? Naturotherapy io fomba io. Ny fitsaboana dia tsy vokatry ny mahazatra an'ny fikambanana fitsaboana allopathic hafa mihitsy! Raha ny marina, raha sendra manatona olona malaza ianao…
Fahafantarana ny maha-zava-dehibe ny fahadiovana am-bava
Ny fahadiovan'ny nify dia iray amin'ireo lafiny manandanja indrindra amin'ny fahasalamanao satria tsy mitazona ny fahadiovanao am-bava fotsiny izany fa mitazona anao ho salama. Ie, ny aretim-bava marary dia mety miteraka aretim-po. Tokony hitady mpitsabo nify…
Ayahuasca Healing - mamelombelona ny fanahy ary mamerina ny fahatsapanao ara-panahy
Ny labiera avy amin'ny natioran'i Amazon, mifangaro amin'ny 'Chacruna' (DMT) sy 'Caapi' (MAOI) dia antsoina hoe Ayahuasca. Raha vaovao ianao miaraka amin'ity fehezanteny ity dia avelao aho hitarika anao hahafantatra ny tena ilaina amin'ny Ayahuasca Healing, sy ny fifandraisany amin'ny fiainana taloha miova avy any Amazon. Ary…
ZAVA-DEHIBE TOKONY HANERENANAO ALOHA ANAO AYAHUASCA VOALOHANY
Ny 'tadin'ny fanahy', Ayahuasca dia labiera shamanika novolavolaina avy amin'ny Amazonians Plants, nantsoina hoe ayahuasca vine (Banisteriopsis caapi) sy ravina chakruna (Psychotria viridis) misy rano. Ny shamanana sy ny mpitsabo, mba hahatratrarana ny fiheverana avo kokoa dia noheverin'izy ireo ho toy ny 'hazon'i…
Mahazoa fahatakarana lalindalina kokoa ny tenanao eo ambany fitarihan'ilay Dieta zavamaniry
Tetikasa feno tafiditra lalina ao amin'ny fampiharana nentim-paharazana ny fanafody indizeny hanatsara ny fizotran'ny fanasitranana amin'ny alàlan'ny fampidirana tombontsoa maharitra. Any Shipibo Ayahuasca, inoana fa ny fahasalaman'ny vatana ara-batana dia mametraka fototra mafy orina ho an'ny fahasalamana…
Zavamaniry Peroviana tsy mampino sy be mpampiasa: manisa ny tombony azo amin'ny zavamaniry
Tsy zava-mahadomelina fety, ny fitambaran'i Ayahuasca dia resaka psychotropika mampivarahontsana, novolavolaina mba hitsaboana aretina, soritr'aretina, ratra na aretina hafa. Mandritra ny ala mikitroka sy mahavokatra any Amazon, dia misy zavamaniry raokandro isan-karazany manasitrana aretina maro. Noho izany, vondrom-piarahamonina…